China HYDRAULIC KUSVIRA MACHINE CLH1000 Vagadziri uye Vanotengesa | Chenli
Enda chishuwo nekusimudzira mukuda kushuvira nebasa, kune ramangwana riri nani risingafadzi kuedza
▲ Mechaniki michina iri pasi pefekisheni itsva yeChenli, Inowana pakati peyakagadzirirwa simbi, Hebei mudunhu. Isu takabatana neinjiniya uyo ane ruzivo rwemakumi emakore sewekupiira kwechiremba. Nhanho nedanho isu tinogadzira michina michina. Kubva pane pendi imwe neimwe kusvika pende tinobata matanho ese zvakatsiga. Chigadzirwa chacho chinoshanda zvakanyanya uye chine mote yemakwikwi mutengo, iyo inounza yakawanda yekuraira. Pagore chairo isu tinogadzira uye tinotengesa makumi masere nemasere makumi mashanu neshanu tambo dzakadhinda tambo. Chenli mechnical machira ekushandisa yakashandiswa kudhipatimendi rakasiyana uye inotumirwa kuMalaysia, Singapore, Iran, India etc.
▲ Hatitsvage huwandu hwakaisvonaka. Isu hatitevedzere huwandu hwemirairo, kutendeseka, nehungwaru kutarisira, hunyanzvi, kunyatso, chikamu chakanyanya kwazvo chekushanda uye mutengo, tichiita musika wedu mukurumbira wakanaka. Ticharamba tichiratidzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, kuyedza kuve nyanzvi, uye isu tinobata maoko pamwe nevatengi takananga munzira imwechete, kusvika pakubata kukuru.
Mumisika yakawanda muChina, Chenli zvigadzirwa zvinotengesa zvakayenzaniswa nemhando imwecheteyo yezvigadzirwa muzvitoro zvevatengesi kumberi (kuchamhembe kweRwizi rweChangjiang, kusimudza mitsetse nemachira zvinotengesa zviri nani kupfuura mamwe marudzi ezvigadzirwa); Makambani ekutengesa ekunze anofarirawo zvigadzirwa zvedu zvakanyanya nekuda kwezvinhu zvigadzirwa-zvemhando yepamusoro uye zvakawanikwa-zvakanyatsorongeka. Iwo anotenderera anotenderera achienderera kugadzira zvigadzirwa muzana muzana remusika musika zvakanyanya uye zvakanyanya kukwirira, Kunyanya kune dzimwe nyika dzeEurope (France, Italy, England, Spain etc) Kubvumidzwa kwechigadzirwa zvakare kwakanyanya; kukura kwenzvimbo yekambani, Kuwedzerwa kuwedzera kwefekisheni, kusimba chiratidzo chekuti tichava neramangwana rakajeka.
Hunhu hwekudzvinyirira waya waya tambo:
▲ Yakakwirira yekushanda mutoro
▲ Yakakwana yakamanikidzwa chimiro
▲ Yakanakisa cauterization kuramba
▲ Kuchengetedza waya tambo mutengo
▲ Ita shuwa iyo chaiyo urefu
▲ Yepamberi tekinoroji uye kushanda zvakanaka
▲ Mhinduro yakanaka yekukara inoshanda nenzvimbo shoma yekushanda.
HYDRAULIC KUPESESA MACHINE CLH1000 Maximum Kuchengetedza Kushanda Mutoro paramende.
Yepfuura: HYDRAULIC KUSVIRA MACHINE CLH1500
Inotevera: HYDRAULIC KUSVIRA MACHINE CLH800
100 Ton Wire Tambo Inodhinda Muchina
Yakakura saizi Wire Tambo Inodhinda Machine
Hydraulic Kudzvanya Machine
Diki Yakakura Wire Tambo Inodhinda Machine
Wire Rope Inosemesa Machine
TY Series (aluminium) mota Hoist
HYDRAULIC KUSVIRA MACHINE CLH100
G80 KUTAMBURA KUTI UVhure